10 Izindlela Zokubhala Izinkumbulo Zokuhamba | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ikhambo Tips > 10 Izindlela Zokubhala Izinkumbulo Zokuhamba
Ukuhamba kuyindlela enhle yokuthola amasiko, izindawo, kanye nabantu. Lapho sihamba sifunda okuningi kangangokuthi ngezinye izikhathi kubonakala kungenakwenzeka ukukhumbula zonke izindawo ezinhle nezinto esizenzile. Nokho, lezi 10 izindlela zokubhala izinkumbulo zokuhamba zizokwenza izinkumbulo zakho ziphile phakade, enhliziyweni yakho, nasekhaya. Kusukela ku-scrapbooking kuya ezinkundleni zokuxhumana, kukhona indlela emangalisayo yokuthi wonke umhambi aphinde aphile izikhathi noma nini lapho ufuna.
1. Izindlela Zokubhala Izinkumbulo Zokuhamba: Ijenali Yezokuvakasha
Ukubhala ama-anecdotes amancane asuka kuwe uhambo olunqamula e-Italy, noma ingadi kabhiya ePrague, ekhumbula indlela ilanga elalikhanya ngayo ngalelo langa, noma ukunambitheka kukabhiya ngoba yizinto ezincane ezenza uhambo lungalibaleki. Ukugcina ijenali yezokuvakasha kuyindlela enhle yokubhala izinkumbulo zakho zokuhamba.
Ukubhala kwansuku zonke kujenali yezokuvakasha, noma izikhathi ezikhethekile, konke kukuwe. Abanye bayakujabulela ukubhala isifinyezo sezithombe ezinhle kakhulu zosuku, ekupheleni kosuku, kuyilapho abanye bephethe incwadi encane yokubhalela, ukuze ukwazi ukubhala yonke into uma kwenzeka uma kunomkhuba wokukhohlwa amagama ezindawo, kanye nabantu, imicimbi. Kuhle kanjani ukupheqa kujenali yezokuvakasha ekhaya, noma ngisho kwelinye iphuzu ohambweni lwakho, futhi ukhumbule abantu abahle ohlangane nabo, nezindawo ezivakashelwe, futhi ubone ngempela ukuthi usuhambe kangakanani.
2. Dala Incwadi Yezicucu Zokuhamba
Ukuhlanganisa izithombe, amakhadi, amamephu, noma amakhadi okuposa ku-scrapbook kuyindlela ejabulisayo yokubhala izinkumbulo zokuhamba. Ngaphezu kwalokho, if you are a creative person, khona-ke cishe uzodala i-scrapbook emangalisayo. In a similar way, le izindawo ezingenakulibaleka sivakashela sicebisa izimpilo zethu futhi sengeze izendlalelo kubunikazi bethu njengabantu, nabahambi, kanjalo nezendlalelo ozongeza ku-scrapbook. Izendlalelo zezitikha, izinsalela zamaphepha, izithombe, nezinkumbulo ezibhaliwe, uzongeza kumuntu onguye, nomhlaba wakho wangaphakathi.
Ngaphezu kwalokho, ama-scrapbooks ayindlela enhle yokwabelana ngohambo lwakho nabangane nomndeni. Izindaba ezivela ohambweni lwakho ziyaphila ku-scrapbook, amawindi ekubukweni, isiko, imiphakathi, kanye nezikhathi, gqoka impilo enemibala, futhi ingenza i-scrapbook ibe ukuzijabulisa, imfihlakalo, kanye nencwadi ethokozisayo yokuletha izindawo kubantu abangakaze bahambe lapho.
3. Dizayina I-albhamu Yakho Yezithombe
Ukubhala kungaba inselele kwabanye abantu; ukuthola amagama alungile, noma ikhono lokuma kancane phakathi nohambo ukuze ubhale. Nokho, ukuthatha izithombe kulula, ngokushesha, futhi kumnandi ukukwenza lapho usohambweni. Ngakho-ke, i-albhamu yezithombe iyindlela enhle kakhulu yokubhala izinkumbulo zokuhamba.
Ngokuchofoza okukodwa uthwebula ubuhle bolwandle e-Ireland noma e-Tuscany ekushoneni kwelanga. Khona-ke, ungakhetha izithombe ezikhethekile kakhulu, futhi uwaqoqe nge-albhamu yedijithali, ngamanothi amancane, izinsuku, nezikhumbuzi ezincane zokukusiza ukuthi wabelane ngendaba yohambo lwakho. Ngaphezu kwalokho, i-albhamu yezithombe ayithathi isikhala esiningi sokulondoloza, futhi ungayibeka phezu kwetafula lekhofi, noma dala ishelufu eliyingqayizivele lawo wonke ama-albhamu wakho wezithombe zokuhamba.
4. Izindlela Zokubhala Izinkumbulo Zokuhamba: Imifanekiso
Ukuhlala ezivandeni zaseVersailles noma ujabulele Ukubukwa kwe-Amalfi Coast - 2 yezindawo ezingavamile kakhulu eYurophu, uthola isifiso kungazelelwe uthwebule umbono lovely. Ngakho, ezikhathini ezinjengalezi, ungathatha incwajana ephaketheni bese uqala ukwenza i-doodling kude nezikhathi nezindawo eziphambi kwakho.
Ngenkathi ukwenza i-doodling kuzwakala kuyindlela enobuhlakani kakhulu yokubhala izinkumbulo zakho zohambo, akudingi ukuthi ube nethalente lokudweba noma ukudweba. Ngaphezu kwalokho, Imifanekiso yakho akufanele ibe sezingeni elifanayo nele-Monet. Njengoba into ebaluleke kakhulu ngokufanekisa izinkumbulo zokuhamba ukuthi zingezabantu, futhi ube neshalofu eligcwele uhambo lwakho olubonisa ukukhumbula uhambo olumangalisayo kulo lonke elaseYurophu.
5. Qoqa Futhi Ubonise Amakhadi eposi
Alengise esiqandisini, yenza ikholaji yegumbi lokuphumula, noma ugqozi udonga, amakhadi eposi Izikhumbuzo ezinhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amakhadi okuposa angenye yezindlela eziphezulu zokubhala izinkumbulo zokuhamba, kulula ukuzithola, futhi zidinga zero umzamo ekugcineni kwakho. Ithengiswa kuzo zonke izitolo zezipho, kanye nemakethe yasemgwaqweni, amakhadi okuposa ayisikhumbuzo esidumile, ukukhumbula uhambo.
6. Izindlela Zokubhala Izinkumbulo Zokuhamba: Ukubhuloga
Ukugcina ibhulogi yevidiyo, noma ngamanye amazwi, I-vlogging iyindlela enhle yokubhala izinkumbulo zokuhamba, ukuhlala impilo yonke. Thatha ikhamera, noma ifoni enekhamera yezinga eliphezulu, futhi udale i-akhawunti ye-YouTube ukuze ulayishe amavidiyo akho okuvakasha, futhi izigigaba zakho zizophila phakade. Ukubhuloga kukuvumela ukuthi ukhethe ozimele abahamba phambili, xoxa izindaba, bese ubhala izikhathi - ngokombono wakho.
Ngaphezu kwalokho, i-vlogging iyindlela enhle yokwabelana ngezindawo nomhlaba. Okokuqala, i-vlogging ngokomuntu siqu futhi ayinayo i-ajenda efihliwe yokumaketha. Okwesibili, i-vlogging ibonisa abantu amaqiniso angaziwa kancane kanye nama-anecdotes ngemuva kwezindawo ezidumile emhlabeni jikelele. Ngakho, i-vlogging iyithuluzi elihle kakhulu le-eco-friendly, ikuvumela ukuthi wabelane ngezindaba zesiko elithile, Mahhala, kanye ne-ajenda, nezwe labahambi.
Olunye uhlobo lokubhuloga kanye nendlela yedijithali yejenali yezokuvakasha ukubhuloga. Inani lamabhulogi abukhoma namuhla livelele, ngakho-ke ungathola izibonelo eziningi zamabhulogi okuvakasha ku-inthanethi uma ungaqiniseki ungaqala kanjani ibhulogi yakho yokuhamba. Kafushane, ungakwazi kalula ukuqala ibhulogi yakho ku-WordPress, layisha izithombe zokuhamba, izinhlelo zohambo, imicabango, futhi nokuningi.
Umehluko omkhulu phakathi kokubhuloga kanye nejenali yezokuvakasha ukuthi ibhulogi iyindlela eku-inthanethi, futhi iyatholakala emhlabeni wonke kuwebhu. Imicabango yakho yomuntu siqu ingaba yigciwane, futhi unabalandeli abaningi, lokho kuzothanda ukufunda nokukhuthazwa yizinkumbulo zakho zohambo.
8. Izindlela Zokubhala Izinkumbulo Zokuhamba: I-Instagram
Imithombo yezindaba enamandla kakhulu emhlabeni wanamuhla inkundla yezokuxhumana, futhi uma kunembe kakhudlwana, I-Instagram. Namuhla, ungalayisha noma yiluphi ulwazi olufunayo nganoma iyiphi indawo emhlabeni, ku-Instagram. Ngaphezu kwalokho, ama-blogger okuhamba kanye nabagqugquzeli bokuvakasha’ indlela engcono kakhulu yokubhala izinkumbulo zokuhamba iwukulayisha izindaba, amasondo, nokuthunyelwe ku-Instagram.
Yingakho, zenzele ikhasi le-Instagram elimibalabala nelijabulisayo, ukubhala ngohambo lwakho, nezinkumbulo eziyigugu. Cabanga nje ukuthi kuzobukeka kanjani ekhasini elimibalabala, ukubuka wonke amavidiyo amafushane, nezithombe ozithathe ohambweni lwakho, ezinyangeni, ngisho neminyaka ezayo ngemva kohambo lwakho.
9. Dala Ibhokisi Lezinkumbulo
Amamephu, amakhadi eposi, futhi amathikithi omnyuziyamu ayizinto ezimbalwa nje abanye bethu abathanda ukuzigcina ohambweni lwethu oluningi emhlabeni jikelele. Kuyamangaza ukuthi ipheshana elincane noma ikhadi lingakubuyisela emuva amamayela kude, esikweni elihlukile, izikhathi, kanye nezikhathi. Ngakho, esikhundleni sokuba nazo zonke lezi zinkumbulo ezinhle ezilahlekile kubhaka, noma isikhwama semali, ukwakha ibhokisi lezinkumbulo kuyindlela enhle yokubhala zonke lezi zinkumbulo zokuhamba, futhi uzigcine ziphephile ezingozini.
Ngokwesibonelo, ungathatha ibhokisi lezicathulo elidala, lihlobise, faka zonke izinkumbulo zakho zokuhamba ngaphakathi, bese uwaveza eshalofini. Omunye umqondo webhokisi lezinkumbulo ukwenza ibhokisi elisuka ngokhuni olugaywe kabusha, ngakho kokubili i-eco-friendly futhi inokudala. Noma kunjalo, ibhokisi lezinkumbulo ingenye 10 izindlela ezikhethekile zokubhala izinkumbulo zokuhamba.
10. Landelela Uhlelo Lohambo Lohambo
A uhambo Dutch qalisa I-Polarsteps iyisibonelo esisodwa sendlela ongazibhala ngayo izinkumbulo zokuhamba emhlabeni wobuchwepheshe osheshayo esiphila kuwo.. Uhlelo lokusebenza lwe-Polarsteps luvumela ukulandelela izinyathelo zakho, imicabango, imibono, izindawo ezivakashelwe, nokunye okuningi ngokunethezeka kwefoni yakho, ngokuchofoza okukodwa. Umphumela owodwa omangalisayo wokulandelela uhambo lwakho i-albhamu yezithombe zokuvakasha ezinhle kakhulu, ekupheleni, yakhelwe futhi yenziwe nguwe, yezikhathi zakho ozithandayo.
ukuze uphethe, izindlela ezahlukahlukene zokubhala izinkumbulo zakho zohambo, kusukela isinyathelo sokuqala akupheli. Kusukela kuzinhlelo zokusebenza kuya kumajenali okuvakasha amadala namahle, ungakhetha noma yikuphi kwalokhu 10 izindlela ezishiwo ngenhla, ukubhala, ukwabelana, futhi ukhumbule uhambo lwakho olumangalisayo emhlabeni jikelele.
Thina ku Londoloza Isitimela uzokujabulela ukukusiza ukuthi uhlele uhambo ongasoze ulukhohlwe lokuzungeza i-Europe, lapho ungakha khona izinkumbulo zokuphila konke.
Uyafuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi yethu “Izindlela Ezingu-10 Zokubhala Izinkumbulo Zokuhamba”Kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fways-document-travel-memories%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
I-DocumentTravelMemories	landelela uhambo lwakho	TravelMemories